Lalao - Ubunlog | Ubunlog (Pejy 2)
Ny famoahana ny "Warzone 2100 4.0.0" dia nambara izay iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ny fanatsarana ny fanohanana ny ...
Sonic Robo Blast 2, lalao hazakazaka kart misy lohahevitra Sonic
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Sonic Robo Blast 2 Kart isika. Lalao go-kart misy lohahevitra Sonic ity
CaveExpress, platformer 2D mahazatra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery CaveExpress isika. Lalao platformer 2D mahazatra io
Terasology, lalao ara-tsindrimandry Minecraft azo alaina ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Terasology isika. Izy io dia lalao iray entanin'ny Minecraft ho an'ny Ubuntu.
Mindustry: lalao boaty sand fiarovana fiarovana multiplatform
Ny fitsipiky ny lalao dia ny manandrana miaro ny tobinao amin'ireo onja fanafihana misesy avy amin'ny robot fahavalo ...
Navoaka ny kinova vaovao an'ny Heroes of Might and Magic II 0.8.3
Roa herinandro lasa izay dia nozarainay teto tamin'ny bilaogy ny vaovao momba ny fiverenan'ny Heroes of Might sy Magic II, satria ny tetikasa dia ...
Ascii Patrol, lalao iray aingam-panahy avy amin'ny Moon Patrol azo alaina haingana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Ascii Patrol isika. Lalao noforonina niaraka tamin'ny endri-tsoratra ASCII aingam-panahy avy amin'ny Moon Patrol.
Mahereza maimaim-poana mahery fo mahery sy mahery II
Ity tetikasa ity dia efa nisy nandritra ny fotoana fohy ho toy ny vokatra misokatra, na izany aza dia najanona ny asa ary ...
SuperTuxKart 1.2 no eto ary ireto ny vaovaony
Ao amin'ny kinova vaovao aseho, fanovana no atao fa tsy ny motera Irrlicht ho an'ny tranomboky SDL2 izay ampiasaina amin'ny famoronana ...
Itch, fampiharana ho an'ity sehatra mpamorona nomerika tsy miankina ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Itch sy ny fampiharana amin'ny birao izy. Ity dia sehatra iray ho an'ireo mpamorona nomerika tsy miankina.
Warzone 3.4 kinova 2100 dia efa navotsotra ary ireo no fanovana lehibe indrindra
Taorian'ny fampandrosoana 10 volana, nambara ny famoahana ny kinova 3.4.0 an'ny lalao paikady fotoana tena izy "Warzone 2100" ...
FooBillard-plus, apetraho amin'ny Ubuntu ity lalao bilyard 3D ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mametraka FooBillard-plus ao Ubuntu. Lalao billiard 3D manintona izy io.
Spelunky Classic HD, apetraho amin'ny alàila ity lalao sehatra ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Spelunky Classic HD isika. Izy io dia lalao video an-tsehatra izay azontsika apetraka amin'ny mailaka.
Cube 2 Sauerbraten, fametrahana amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny Flatpak
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Cube 2 Sauerbraten isika. Ity no ampahany faharoa amin'ny lalao Cube FPS malaza misy amin'ny Flatpak.
Namoaka ny kinova vaovao an'ny motera lalao Godot 3.2 miaraka amin'ireo fiasa vaovao ireo
Navoaka ny motera lalao Godot 3.2 maimaim-poana, izay mety amin'ny famoronana lalao 2D sy 3D. Ny motera dia manohana fiteny ...
Battlefield V amin'ny Linux dia mandrara sy mandrara ny mpilalao, araka ny "fitaka"
Nandritra ny andro maromaro izao, maro amin'ireo mpilalao ny lalao Battlefield V malaza izay mitantana ity lohateny ity amin'ny fizarana Linux no nitatitra fa ...
Tonga ny kinova vaovao an'ny SuperTuxKart 1.1 ary ireto ny vaovaony
Andro vitsy lasa izay dia nambara ny fanombohana ny kinova vaovao an'ny lalao hazakazaka loharanon-karena malaza SuperTuxKart 1.1, izay efa ...
OpenClonk, lalao hetsika 2D maimaimpoana ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery OpenClonk isika. Lalao action 2D maimaimpoana maimaimpoana io.
FreedroidRPG, apetraho amin'ny RPG mifototra amin'ny Paradroid ity RPG ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery FreedroidRPG isika. RPG mifototra amin'ny Paradroid mahazatra izy io.
Fiainana Hafahafa 2 izao no misy ho an'ny Linux sy macOS noho ny Feral Interactive
Feral Interactive dia nanao azy indray: ported Life Is Strange 2 azo alaina ho an'ny macOS sy Linux amin'ny sehatra toy ny Steam.
Ny lalao misokatra malaza Mario-style dia tonga ao amin'ny kinova SuperTux 0.6.1 vaovao
Ireo mpandraharaha izay miandraikitra ny tetikasan'ny lalao malaza "SuperTux" dia faly nanambara ny fanombohana ny ...
Oolite, simulator ady sy habakabaka 3D
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Oolite isika. Simulator ady sy habakabaka 3D ho an'ny Ubuntu.
Planet Blupi, paikady adala sy lalao mahafinaritra an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Planet Blupi isika. Izy io dia paikady adala sy lalao traikefa nahafinaritra misy .AppImage.
Steam dia hitantana ireo lalao ao anaty kaontenera mitokana ary koa manambara ny kinova vaovao an'ny Proton 4.11-8
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, namoaka vaovao tsara roa ny valve, ny iray amin'izany dia ny famoahana ny kinova vaovao amin'ny tetikasany ...
BZFlag, ady tank 3D marobe ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery BZFlag isika. Izy io dia lalao multiplayer izay ahafahanao manana ady tank amin'ny 3D.
Hedgewars, lalao paikady mifototra amin'ny loharanom-baovao misokatra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Hedgewars isika. Lalao stratejika multiplayer mahafinaritra miaraka amin'ireo hedgehogs ho protagonista.
AstroMenace, lalao shooter habaka 3D maimaimpoana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery AstroMenace isika. Mpitifitra habaka 3D ho an'ny Ubuntu.
YORG 0.11, lalao hazakaza-paika Micro Machines
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Yorg isika. Izy io dia lalao hazakaza-paika Micro Machines izay hahafaly ny mpampiasa.
Warzone 2100, lalao paikady fotoana mivantana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Warzone 2100. Kilalao paikady fotoana maharitra ho an'i Ubuntu.
Roberta, tetikasa vaovao hilalaovana miaraka amin'i ScummVM amin'ny Steam
Androany isika dia hiresaka momba an'i Roberta, izay tetikasa vaovao mikendry ny hanitatra ny fiasan'ny mpanjifa Steam ...
Navoaka ny kinova vaovao an'ny Proton 4.11-3 ary Proton-i misy tetik'asa iray manohana ny divay
Juuso Alasuutari, manam-pahaizana manokana amin'ny fampiroboroboana ny rafitra fanodinana feo ho an'ny Linux (mpanoratra jackdbus sy LASH), dia nanome ...
Jumpaï, lalao video mamorona sy hafa
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Jumpaï isika. Izy io dia lalao video sehatra mamorona izay tsy mitovy amin'ny ambiny.
Ninslash, lalao sehatra 2D mahafinaritra sy haingana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Ninslash isika. Izy io dia lalao haingam-pandeha haingam-pandeha, loharano misokatra, multiplatform 2D.
RetroArch, ilay emulator malaza dia ho tonga amin'ny Steam amin'ny 30 Jolay
Ny emulator RetroArch malaza dia ho tonga amin'ny Steam amin'ity 30 Jolay ity ary hamela antsika hilalao ny kilasika amin'ny fitaovana mety rehetra.
Stunt Rally lalao fifaninanana hazakazaka marobe
Stunt Rally dia lalao fifaninanana famoriam-bola mahafinaritra izay misy singa stunt (toy ny fitsambikinana, ny tadivavarana, ny lalana ary ny fantsona) ...
Toontown Rewritten, azo apetraka ho snap amin'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ToonTown Rewritten isika, lalao ho an'ny fianakaviana iray manontolo izay azontsika apetraka amin'ny alàlan'ny fonosana haingana ao amin'ny Ubuntu.
Google Stadia dia nambara tamin'ny fomba ofisialy ary efa fantatra avokoa ny antsipiriany
Tamin'ny volana martsa, Google dia nanambara ny Google Stadia, sehatra lalao video streaming izay azonay nilalao saika amin'ny toerana rehetra ...
The Dark Mod, lalao mpangalatra miendrika mpangalatra ho an'i Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ilay mod maizina isika. Lalao ho an'ny olona voalohany momba ny mpangalatra toa ny halatra.
Freedoom, milalao Doom klasika amin'ny fomba hafa
Freedoom dia lalao natao ho an'ireo izay nilalao Doom roa taona lasa izay. Raha iray amin'izy ireo ianao dia tsy azonao hadino izany.
Midnightmare Teddy, lalao fitifirana hita ao amin'ny flathub
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Midnightmare Teddy isika. Ity dia lalao fitifirana hita ao amin'ny flathub.
Unknown Horizons lalao paikady mifototra amin'ny Anno 1602
Unknown Horizons dia tetikady fananganana zanatany amin'ny fotoana maharitra sy lalao simulation toekarena, mifototra amin'ny lalao ...
Widelands lalao paikady amin'ny fotoana tena izy mitovy amin'ny The Settlers
Widelands dia lalao paikady tena izy (ho an'ny tambajotra marobe na ho an'ny mpilalao tokana) izany hoe…
Navoaka ny kinova Supertuxkart 1.0 vaovao mahalala ny vaovaony
Taorian'ny fandrosoana herintaona sy tapany dia natolotra ny fandefasana ny kinova Supertuxkart 1.0 vaovao, izay misy fanatsarana maro amin'ny ...
SuperTuxKart 0.10 RC 1 tonga manatsara ny fanohanana an-tserasera
Efa manakaiky ny famoahana ofisialy ny SuperTuxKart ary efa ananantsika ny kinova Kandidà Release voalohany amin'ity clone Super Mario Kart ity.
Tonga ny kinova vaovao an'ny Proton 4.2-1 ary ireo no fanatsarana azy
Miavaka ny fanavaozana ny kaody vaovao momba ny divay 4.2. Raha oharina amin'ny sampana teo aloha miorina amin'ny divay 3.16, ny habe ...
Amin'ny Alakamisy 28 martsa, ny lalao DiRT 4 fiara dia ho hita amin'ny Linux sy macOS. Afatory ny fehikibo izay tonga miolakolaka!
Ny Stadia an'i Google dia tsy maharesy lahatra ary ireo no antony
Ny tolo-kevitr'i Google ho an'ny lalao video, Stadia dia tsy mahavita mandresy lahatra ny vondron'olona milalao. Lazainay aminao ny antony.
Google dia naseho tao amin'ny GDC, Stadia, ny serivisy lalao rahona
Fantatsika izao izay hazonin'i Google amin'ny lalao video. Rehefa avy nankafy ny fiahiahiana nandritra ny andro maro i Google dia nampiditra an'i Stadia, ny ...
Cave Story, lalao sehatra ho an'ireo mpankafy ny kilasika
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny Cave Story isika, lalao sehatra mahazatra izay hahafaly ireo rehetra nahalala MSDOS.
Ny kinova vaovao an'ny Proton 3.16-8 dia efa navotsotra ary tonga miaraka amin'ny DXVK 1.0
Ny Proton mandeha amin'ny Steam dia nohavaozina vao haingana mba hanatsarana tsara ny traikefa lalao ho an'ireo mpampiasa…
Maimaimpoana izao ny Basingstoke ho an'ny Linux; tsy ho ela ny lalao Puppygames sisa
Basingstoke lasa maimaim-poana ho an'ny Linux, saingy tsy izany ihany no vaovao mahafaly avy amin'ny Puppygames: ho maimaim-poana atsy ho atsy ny lalao rehetra!
Fametrahana Mari0 (Mario + Portal) ao Ubuntu amin'ny fampiasana fonosana haingana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mametraka an'i Mari0 miaraka amin'ny fonosana haingana. Lalao izay mamorona ny Super Mario Bros tany am-boalohany miaraka amin'ny Portal.
Namoaka ny kinova Minetest 5.0.0 vaovao, klone misokatra an'ny MineCraft
Minecraft dia iray amin'ireo lalao geek malaza indrindra tato ho ato. Ho an'ny olona mbola tsy nandre ...
Urban Terror, lalao shooter multiplayer an-tserasera
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery Urban Terror isika, mpitifitra marobe izay azontsika apetraka amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny fonosana haingana.
Lanitra tsy misy farany - Lalao ady sy fikarohana eny amin'ny habakabaka
Endless Sky dia lalao varotra sy ady amin'ny habakabaka 2D izay entanin'ny andian-tsarimihetsika Escape Velocity. Manomboka kapitenin'ny sambo kely ianao ...
GameHub tranomboky iray hitantanana ny lalao amin'ny sehatra samihafa
GameHub dia fitehirizam-boky mirindra izay mamela anao hijery, hametraka, hihazakazaka ary hanala ny lalao manohana ny lalao tompon-tany sy tsy tompon-tany avy amin'ny loharano isan-karazany
Trigger Rally, lalao hazakaza-tsoavaly HTML5 mahafinaritra indrindra
Androany isika dia hiresaka momba ny lalao hazakazaka tena tsara izay azoko antoka fa mihoatra ny iray no maniry ny Trigger Rally dia lalao hazakazaka
Eternal Lands, MMORPG marobe misy endrika Android
Eternal Lands dia lalao multiplayer an-tserasera (MMORPG) maimaim-poana, lalao multiplayer fantasme 3D maimaim-poana. Tontolon'ny nofinofy ny sehatra
Live For Speed, lalao hazakazaka azo alaina amin'ny Snap
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny fomba fametrahana ny lalao hazakaza-tsoavaly mivantana amin'ny alàlan'ny fonosana haingana ao amin'ny Ubuntu izahay.
SuperTuxKart dia lalao 3D racing arcade fanta-daza amin'ny Linux natao ho an'ny rafitra fiasa mifototra amin'ny Linux.
Araka ny voalazan'ny lohatenin'ny lahatsoratra, anio dia hiresaka kely momba ny Ppsspp izay emulator loharano misokatra ho an'ny PSP, manana fahazoan-dàlana ...
Speed ​​Dreams, lalao hazakazaka hita ao amin'ny Flathub
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Speed ​​Dreams isika. Ity dia lalao hazakazaka 3D izay ho hitantsika ao amin'ny Flathub
Red Eclipse lalao maimaimpoana tsara ho an'ny Ubuntu
Red Eclipse dia FPS maimaimpoana ho an'ny mpilalao sy mpilalao marobe (Shooter First Person) an'i Lee Salzman sy Quinton Reeves ho an'ny PC, lalao an-tserasera ity lalao ity
Ahoana ny fametrahana Xbox Controller amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Xboxdrv dia manolotra safidy safidy maro isan-karazany: ahafahanao maka tahaka ny fisehoana amin'ny keyboard sy ny totozy, ny bokotra remap, ny automate ...
Ireo emulator sy lalao amin'ny fomba Retro ao amin'ny Ubuntu mampiasa fonosana haingana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ireo emulator sy lalao amin'ny fomba Retro isika izay azo apetraka amin'ny alàlan'ny fonosana haingana.
Fiverenana ny tranolay, tohiny tsy ofisialy amin'ny Andro tranolay
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Return of the Tentacle Prologue isika. Ity dia tohiny tsy ofisialy amin'ny lalao angano Andro amin'ny tranolay
Battle for Wesnoth 1.14, fametrahana amin'ny Ubuntu 18.04 avy amin'ny PPA
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia ho hitantsika ny fomba fametrahana Battle for Wesnoth 1.14 avy amin'ny PPA tsy ofisialy amin'ny kinova Ubuntu
Mitam-piadiana sy mitam-piadiana: lalao ady amin'ny habakabaka miaraka amin'i… Jellies?
Ny tantara dia manomboka amin'ny ho avy izay iomanan'ny olombelona am-pilaminana, ka amin'ity dingana tetezamita ity dia tsy maintsy mandefa ...
Minecraft Java Edition, fametrahana ao amin'ny Ubuntu 18.04 avy amin'ny tranonkala, snap na PPA
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mametraka Minecraft Java Edition ao amin'ny Ubuntu 18.04 miaraka amin'ny fonosana alaina avy amin'ny tranokala, PPA na snap package.
Ny MMORPG tsara indrindra ho an'ny Ubuntu 18.04
Torolàlana kely amin'ny lalao video MMORPGs tsara indrindra izay azontsika jerena sy ankafizintsika ho an'ny Ubuntu 18.04 nefa tsy mampiasa Steam ...
Amin'ity remastering vaovao an'i Turok ity dia ahitantsika ao aminy, sary HD panoramic maranitra sy marina, backend OpenGL ary volavola sasany.
Chromium BSU - lalao sambon-danitra toy ny arcade
dia lalao video karazana arcade, fomban'ny shooter mitsangana miaraka amin'ny sambon-danitra. Ity dia lalao video mifototra amin'ny rindrambaiko sy kaody maimaimpoana ...
Ny lalao ankamantatra tsara indrindra ho an'ny Ubuntu
Torolàlana miaraka amin'ny lalao piozila tsara indrindra misy an'ny Ubuntu ary afaka mametraka sy milalao izahay nefa tsy mampiasa fitaovana ivelany na ...
Total War Saga: seza tetika tsara indrindra ny seza fiandrianan'i Britannia
Saga ady tanteraka: ny seza fiandrianan'i Britannia dia lalao mahafinaritra iray izay avy amin'ny fahombiazan'ny Total War izay manana sagasy maro efa nahazo tena ...
Dust Racing 2D, lalao fifaninanana fiara nosoratana tamin'ny Qt sy OpenGL
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Dust Racing 2D isika. Ity lalao multiplatform 2D hazakazaka voasoratra ao amin'ny QT sy OpenGL ity dia azo ampiasaina amin'ny Ubuntu tsy misy olana.
Lalao maimaimpoana 5 miaraka amin'ny fanohanan'ny Linux
Izany dia satria efa ela ny Linux dia tsy nanana katalaogin'ny lalao tsara ary 10 taona lasa izay, izay raha te hankafy titre tsara ianao dia mila manao configurations maro teo aloha ary miandry ny zavatra rehetra hihazakazaka tanteraka nefa tsy misy fihemorana.
RetroArch ny emulator lalao rehetra-amin'ny-iray
Ampianarinay anao ny fomba fametrahana sy fikirakirana ny RetroArch amin'ny rafitra Ubuntu sy ny derivatives anao. Miaraka amin'ity programa mahafinaritra ity dia ho afaka mankafy karazana emulator lalao ao anaty programa iray ianao, ahafahanao mamorona tranomboky lalao lehibe amin'ny toerana iray.
Ahoana ny fananana Twitch amin'ny Ubuntu 17.10
Lazainay aminao ny fomba fametrahana Gnome Twitch, mpanjifa Twitch tsy ofisialy izay miasa amin'ny Ubuntu 17.10 sy Ubuntu Gnome ary miasa tanteraka amin'ny serivisy streaming ...
Supertuxkart dia mamoaka ny kinova farany 0.9.3
Amin'ity fizarana vaovao an'ny Supertuxkart ity dia ny kinova farany farany 0.9.3 dia mahita asa vaovao lehibe isika, izay ny fahaizana manoratra.
Ahoana ny fametrahana Hearthstone amin'ny Ubuntu 17.10
Fampianarana kely momba ny fomba fametrahana sy filalaovana Hearthstone ao amin'ny Ubuntu 17.10. Torolàlana ho an'ny lalao mora foana nefa tsy mila miverina amin'ny Windows
SupertuxKart, andramo ity lalao kilasika ity amin'ny Ubuntu-nao
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery SupertuxKart isika. Ity dia lalao kilasika amin'ny rafitra Gnu / Linux izay manahaka ny Supermario Kart fanta-daza.
FlightGear, apetraho mora foana ity simulator sidina ity avy amin'ny PPA
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny FlightGear isika. Ity dia simulator manokatra loharano misokatra mahafinaritra ho an'ny Ubuntu.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Trigger Rally isika. Ity dia lalao loharano misokatra ho an'ny ekipa manana loharanom-pahalalana ambany.
Tonga any Ubuntu ihany i Minecraft saingy tsy fantatra ny daty namoahana azy
Mpanamboatra Minecraft maromaro no nanamafy ny fisian'ny lalao video Minecraft ho an'ny Gnu / Linux saingy mbola tsy fantatra ny daty famoahana azy.
Citra: emulator Nintendo 3DS loharano misokatra
Citra dia emulator Nintendo 3DS loharano misokatra nosoratana tamin'ny C ++, nahazoana alalana tamin'ny GPLv2. Ity emulator ity dia novolavolaina tao an-tsaina ...
Azavainay ny fomba fampiasana sy fametrahana emulator lalao video Sony PSP amin'ny Ubuntu 17.04. Fomba azo ampiharana lalao video mahery
RPCS3: PS3 Game Emulator amin'ny Ubuntu
RPCS3 dia emulator sy debugger misokatra voasoratra ao amin'ny C ++ ho an'ny Windows sy Linux. Ny emulator dia afaka mandefa sy milalao lalao an-jatony.
Alpha 22 0 AD dia misy izao
0 AD dia lalao video tetikady tena izy. Ny lalao dia mamerina ny sasany amin'ireo ady epic lehibe indrindra teo amin'ny tantara taloha. Mandrakotra ny fe-potoana voatondro.
Ampidiro ny emulator PS1 PCSX-Reloaded amin'ny Ubuntu
PCSX-Reloaded dia emulator PlayStation 1 marobe izay ahafahantsika mankafy ny lalao amin'ny solosaintsika. Tsy toy ny hafa ...
Lisitry ny lalao ho an'ny terminal Ubuntu izay azonao apetraka mora foana ary azonao atao ny mankafy kilasika mahafinaritra.
Mpanamboatra maro no namorona kinova maimaim-poana amin'ny lalao video Tomb Raider malaza. Ity lalao video ity dia antsoina hoe OpenTomb ary azontsika atao ny milalao azy io ankehitriny ...
GNOME Games dia vonona ary azo alaina ao amin'ny Ubuntu 17.04
Tsy nihena ny nantenainay: ny GNOME Games dia efa azo alaina ao amin'ny Ubuntu 17.04 Zesty Zapus. Milalao!
Misy ny PPSSPP 1.4 ankehitriny, misy ny fanohanana ny Direct3D 11
Ny emulator malaza indrindra amin'ny Sony PSP dia nohavaozina. PPSSPP 1.4 dia miaraka amin'ny vaovao mahaliana, toy ny fanohanana ny Direct3D 11
Raha mpampiasa Linux ianao, tianao ny lalao fa tsy an'ny tompony, ity ny lisitry ny lalao open source tsara indrindra ho an'ny Linux.
Game 0 AD dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana maro
Ny lalao multiplatform 0 AD dia havaozina ao anatin'izany ny fizarana vaovao, ny Selucids, miaraka amin'ireo singa rehetra ao aminy ary ny lalao vaovao maro.
Tonga ny andro: Navoaka ho an'ny rafitra fiasa maromaro ny Tomb Raider, ary ny tena zava-dehibe dia azo alaina ho an'ny Ubuntu izany.
0 fanavaozana AD ho an'ny Timosthenes Alpha 20 manampy sarintany 10
Taorian'ny fampandrosoana 4 volana, ny tetikady tetika ara-potoana (RTS) lalao 0 AD dia novaina tamin'ny kinova Alpha 20,
Ahoana ny fametrahana emulator MAME amin'ny Ubuntu
Raha milina arcade no nilalaovanao tamin'ny faran'ny taonjato lasa, azo antoka fa fantatrao i MAME. Azavainay ny fomba fametrahana ny emulator amin'ny Ubuntu.
Ireo lalao dimy tokony hananantsika ao amin'ny Ubuntu
Manolotra torolàlana kely izahay miaraka amin'ireo lalao dimy tsara indrindra tokony hanananay ao amin'ny Ubuntu, araka ny sokajy misy azy ireo.
Ahoana ny fametrahana sy filalaovana SuperTux ao amin'ny PC PC anay
Tianao ve ireo lalao amin'ny sehatra? Eny, SuperTux dia clone Mario Bros. izay tsy azonao adino.
Warsow dia mahatratra ny kinova 2.0 miaraka amin'ny vaovao manandanja
Navoaka i Warsow kinova 2.0, FPS (mpitifitra voalohany) izay azo alaina ho an'ny PC Ubuntu.
Play maimaim-poana 0 AD Tonga amin'ny Alpha 19 Syllepsis Version
Ny lalao paikady amin'ny fotoana tena izy 0 AD dia mahatratra ny kinova Alpha 19 Syllepsis ary azo alaina amin'ny Windows, Mac ary Linux.
DeSmuME, milalao ny Nintendo DS amin'ny PC amin'ny Ubuntu
Te-hilalao ny Nintendo DS amin'ny PC-nao amin'ny Ubuntu ve ianao? Azo natao nandritra ny fotoana ela io noho ny emulator DeSmuME
Milalaova lalao chess amin'ny Ubuntu
Boky kely momba izay programa tokony hampiasaina amin'ny filalaovana chess ao amin'ny Ubuntu maimaim-poana ary tena tsara miaraka amin'ireo kinova voaloa.